Allgemein – We Help and Care
( မြန်မာ/English below) We Help and Care hat am 12.01.2022 Nahrungsmittel und Medizin im Wert von 3.550.000 (~1.775 €) an Binnenlandflüchtlinge in Camps Rund um das Dorf Hnan Khar in der Region Gant Gaw (Magway Distrikt) gespendet.WHC bedankt sich bei allen österreichischen Spendern, die mit viel Liebe gespendet haben, um den Menschen in Myanmar zu helfen. Das …
Donation to IDPs camp located in Gant Gaw Township, Magway District Read More »
We Help and Care has donated the medicines and 100 impregnated bed nets worth 2,000,000 Kyats to the IDPs camp located at the western part of DeMoSo on 24.11.2021.We Help and Care Organisation is grateful and we would like to express our sincere thanks to all the donors who aid in our projects by contributing …
Donation to IDPs camp located at the western part of DeMoSo Read More »
We Help and Care hat am 07.11.2021 Grundnahrungsmittel und Grundversorgung im Wert von MMK – 678900 Kyats an ein Waisenhaus im Hmaw Bi Township gespendet.Wir haben auch die Weihnachtswünsche von 61 Kindern erfüllt und ihnen am 5.12.2021 die Geschenke überreicht. Zusätzlich übergaben wir Spielzeug und Mützen für 110 Kinder, Schuhe und Kinderzubehör für 150 Kinder …
Weihnachtsgeschenke für Waisenhäuser/ Christmas presents for Orphan children Read More »
Unser Team bedankt sich herzlich bei der Gruppe “Freelance – Kutkai Youth Group” (Freelance – ကွတ်ခိုင်လူငယ်အဖွဲ့) für den Transport und die Übergabe von Gütern des täglichen Bedarfs, Essensrationen und Gewand im Namen von We Help and Care. Diesesmal haben wir an ein IDPs camp in westlichen Teil vin Man Lwal, Pha Waung Village gespendet.Freelance – …
Hilfe für das 4. IDPs Camp im Norden des Shan State / Donation for the 4th IDPs Camp in the North of Shan State Read More »
ကျွန်ုပ်တို့ WHC မှ October 14 ရက်နေ့တွင် Pankl Racing System AG Company နှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ပုံငွေပွဲမှ ရရှိသည့် အလှူငွေများအာရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းများဖြစ်သော မုံးစီး၊ အောင်သပြေ နှင့် နပက KBC စသော စခန်းများရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၂၄ စုထံသို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၁သိန်း တန်ဖိုးရှိသော ငါးခြောက် (ငါးနီတူ)၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ပဲဝါလေး၊ အသားတု၊ ငါးပိ၊ ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် နှင့် ကလေးများအတွက် မုန့်ပဲသားရေစာတို့အား ၅၊၁၁၊၂၀၂၁ ရက်တွင် ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ပံ့ပိုးကူညီပေးသော အလှူရှင်အပေါင်းကို WHC မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။အကူအညီလိုအပ်နေသူများကို ကူညီလိုသော အလှူရှင်များအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ link မှတဆင့် လှူဒါန်းပေး၍ဖြစ်စေ၊WHC ဘဏ်အကောင့်အား တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲ၍ဖြစ်စေ …
ရှမ်းမြောက် မုံးစီး၊အောင်သပြေ နှင့် နပက KBC စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသို့ အလှူ Hilfe für Binnenlandflüchtlinge Read More »
We Help and Care konnte gemeinsam mit der Firma Pankl Racing Systems AG einen Charity Event durchführen. Am 14.10.2021 kochte der Verein WHC gemeinsam mit dem Küchenteam bei Pankl ein burmesisches Mittagsessen, dessen Umsatz dem Verein We Help and Care gespendet wurde. Pankl verdoppelte diesen Tagesumsatz und mit den zusätzlichen freien Spenden der Mitarbeiter:innen konnten …
Burmese Cuisine Day at Pankl Racing Systems Read More »
ကျေးဇူးတင်လွှာ (English Below)ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တောင်သူဦးကြီးများ စိုက်ပျိုးထားသည့် အသီးအနှံများအားဝယ်ယူပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသော အိမ်ထောင်စုများသို့ လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဥ်တွင် ဒုတိယအသုတ်အနေဖြင့် ခိုကိုးရာမဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်း၊ ချောင်းကျိုး အာစိဏ္ဏသီရိကျောင်း၊ အဝါရောင်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ပရဟိတအသင်း (YGW) တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မာမီကွတ် ခိုကိုးရာမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကူညီရေး (အရှေ့ဒဂုံ)၊ မွန်မြတ်စိတ်ထား တွယ်ရာမဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သာ (မြောက်ဥက္ကလာပ)၊ အောင်ပရဟိတကျောင်း (လှိုင်သာယာ)၊မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ• လပြည့်ဝန်းမိဘမဲ့ဂေဟာ• ဘိုးဘွားများစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ• ဘုရားမေတ္တာကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရေးဂေဟာ• ဖန်ခါးကုန်းကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ• စာဖြူစုကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ• AASAW ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ• တောင်ဝင်ဂေဟာ• ဆည်းဆာရောင်ခြည် (S.E.C)• နော်ဆေးဘိုးဘွားရိပ်သာ• ဂရုဏာရှင်ဥယျာဉ် စသော နေရာ ၁၆ နေရာများသို့ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁၁၅၁ ယောက်စာ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ မြေပြင်အခြေအနေများကြောင့် သွားရောက်လှူဒါန်းသည့်နေ့ အနည်းငယ်ကြန့်ကြာသွားသည့်အတွက်လည်း အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပြုရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်များကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ …
second batch of buying vegetables from the farmers of Shan State and deliver to households having difficulties for foodstuffs Read More »
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တောင်သူဦးကြီးများ စိုက်ပျိုးထားသည့် အသီးအနှံများအားဝယ်ယူပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသော အိမ်ထောင်စုများသို့ လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဥ်တွင် ပထမအသုတ်အနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၁၀၀၀စာကို လှိုင်သာယာနှင့် မှော်ဘီရှိ အကူအညီလိုအပ်နေသော အိမ်ထောင်စုများ၊ လှုိင်သာယာရှိမသန်စွမ်းသူများအသင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်း နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများအားပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ရည်မှန်းထားသည့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၁၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀ စာကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အလှူရှင်များ၏ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်မှုကြောင့် ၂ရက်အတွင်း အလှူငွေပြည့်မှီသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သဒ္ဓါတရား နည်း၊များမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့သော အလှူရှင်များအားလုံးသို့ We Help and Care အဖွဲ့မှ တောင်သူဦးကြီးများနှင့် အကူအညီလိုအပ်နေသူများကိုယ်စား အထူးပင် လှိုက်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါသည်။ Appreciation Letter Onaplan of buying vegetables from …
Wir helfen Landwirtlnnen und Bedürftigen ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလှုဒါန်းခြင်း Read More »
Oxygen Concentrator လှူဒါန်းခြင်း(အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုရန် & English Below)We Help and Care Organization (WHC) hat4Sauerstoffkonzentratoren im Wert von 7.400.000 Myanmar Kyats (ca. 4352 €) gespendet, die für die Reduzierung der Zahl der Covid-19-Patienten und die Prävention notwendig sind.Wir sind allen Spendern dankbar, die unsere Projekte auch nur mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Wir brauchen …
Oxygen Concentrator Machines Donation Read More »
နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအား Covid-19 ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေးတွင်အသုံးပြုရန် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း(အောက်တွင် မြန်မာလိုဖတ်ရှုရန် & English Below)Der Verein We Help and Care Organisation (WHC) hat PPE Schutzanzüge (100), OP-Masken 100 Pakete (in Summe1000 Stück), Gesichtschilder (200), Schutzbrillen ( 50), Sicherheitsschuhe (50), Oximeter (20) und Thermometer (4) im Wert von 2.000.000 Myanmar Kyats (ca. €1050) an das Nanyun Volunteer Team mit Sitz …
Donation to Nanyun Volunteer Team based in Nanyun Town, Naga Autonomous Region, Sagaing District for the prevention of Covid-19. Read More »